एक दिनमा ३५ करोड, एक वर्षमा ३६५ दिनले गुणा गर्दा १२ हजार सात सय ७५ करोड हुन्छ, यो स्थितिमा देशलाई कतिन्जेल राखिरहने ? - Suvham News
एक दिनमा ३५ करोड, एक वर्षमा ३६५ दिनले गुणा गर्दा १२ हजार सात सय ७५ करोड हुन्छ, यो स्थितिमा देशलाई कतिन्जेल राखिरहने ?
कमल कोइराला शुक्रवार, फागुन २५, २०७४
नेपालको संविधान बन्दा सबै तराईमधेस प्रदेश एउटै मानेर सम्झौता गर्न जति भारतले दबाब दिए पनि नेताहरूले मान्न सकेनन्। तर ६ वटा प्रान्त सबै जातजातिको प्रान्त बनाए पनि जातीय आधार विभाजित गरी प्रान्त नम्बर २ बनाउने काम गरे। सातमध्ये ६ प्रान्तमा बाहुन, क्षेत्री, नेवार, यादव, झा, सिंह, कायस्थ, थारू, मुसहर, बाँतर, राजवंशी, ताजपुरिया, राई, लिम्बु अर्थात् सबै जातजातिका नेपालीको हुने बनाइयो। तर प्रान्त नम्बर २ तिनीहरूभन्दा पृथक् प्रकृतिको बनाइयो। प्रान्त नम्बर २ हिटलरलाई तुष्ट गर्न जर्मन भाषी सुडेन्टेन्डल्यान्ड चेकोस्लाभाकियाबाट चुडेर छुट्ट्याइएको झझल्को हो भनी लेखिएको लेख यसै दैनिकमा दुई वर्षअघि (०७२ पुस १९ ) पंक्तिकारको लेख प्रकाशित छ।
एक दिनमा ३५ करोड, एक वर्षमा ३६५ दिनले गुणा गर्दा १२ हजार सात सय ७५ करोड हुन्छ। यो स्थितिमा देशलाई कतिन्जेल राखिरहने ? समृद्ध नेपालको परिकल्पना यही अवस्था कायम राखेर सम्भव होला ?
Prevविद्यापीठको जग्गा जोगाउन हारगुहार
Nextकानून निर्माणमा लगानी गर्न विश्व बैंकलाई गुहारे पछि, कानुन नेपाल अनुकुल बनाउलाउन त मुख्यमन्त्री पोखरे ज्यु?